Freshmarketer: Nyochaa, nwalee ma hazie nke a na Conversion Optimization Suite | Martech Zone
Ọnụọgụ ọrụ a na-etinye na njirimara dijitalụ na ọdịnaya nke na-anaghị eme ka azụmahịa ọ bụla baa ụba. Ọ bụ ọbụna na-akụda mmụọ na ọrụ n'akụkụ nke ụlọ ọrụ ebe ndị ahịa ga-esi ọnwụ na a oru ngo ẹkedori a na saịtị, mwekota, ma ọ bụ ọrụ… ma mgbe ahụ, agaghị etinye oge na ume na-ebuli ojiji nke na ikpo okwu.
Optimization bụ isi ihe kpatara na ụlọ ọrụ anaghị enwe ike ịghọta nlọghachi ha na ntinye ego. Dịka onye na-eweta ọrụ, anyị na-ekwusi ike na njikarịcha bụ akụkụ nke usoro niile. Na-enweghị ya, ụlọ ọrụ agaghị aga nke ọma na mgbe ahụ, anyị ga-aza ajụjụ… ọbụna ma ọ bụrụ na ahịa akpọkwa njikarịcha ịbụ akụkụ nke mkpokọta oru ngo. Anyị enweghị ike ịjụ mmadụ niile, mana anyị na-anwa!
Freshmarker's Ntughari njikarịcha Suite Atụmatụ
Zọpụta oge na ego gị site n'ịghara ịbagharịrị n'etiti ngwaọrụ. Ihe niile ịchọrọ iji nyochaa, bulie, ma hazie weebụsaịtị niile dị Freshmarketer.
Heatmaps - Jiri anya nke uche hụ ọrụ ndị ọbịa na weebụsaịtị gị. Chọpụta clic, mpịakọta na ezigbo oge. Chọta ma dozie njikọ ndị gbawara agbawa, onyonyo na-adọpụ uche, na arụmọrụ webụsaịtị.
Idebe Oge Ọbịa ma na-egwugharị - Weghachi ahụmịhe ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma chọpụta ebe ha rapaara, nke ngalaba kachasị amasị, yana ndị eleghara anya.
Gbasaa Ule - Nwalee ọtụtụ URLs, ọtụtụ ọdịiche iji mee mgbanwe mgbanwe dị mgbagwoju anya na saịtị gị, nke nwere ike ịkpata ntụgharị ka mma ma nwekwuo ego gị.
Nnwale A / B - Nyochaa nkwenye weebụsaịtị iji chọpụta ibe weebụ ka mma. Mepụta ọdịiche dị mfe na nchịkọta akụkọ WYSIWYG ma tụọ ihe mgbaru ọsọ ego.
Personalization - Hazie ahụmịhe maka ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma jiri nwayọ kpoo ha iji tọghata. Melite ma na-agba ọsọ ahaziri ahụmahụ na-enweghị metụtara gị tech otu.
Analydị Analytics - Ebuli gị iche n'ịwa ọzọ na-eduga. Tụọ ndọpụ, oge ịla azụ, ọnụego mgbazi, yana usoro ndị ọzọ iji bulie ma gbanwee ndị ọbịa karịa ka ha duga.
Nchịkọta Ọrụ - Sochie ndọtị ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ọtụtụ peeji, ma chọpụta ebe ewepụrụ ohere ịtụgharị.
Ntuli aka na nzaghachi - Mee ka ndị na-ege gị ntị na-etinye aka ma gbochie ha ịpụ na saịtị gị site na ịmalite ozi na oge kwesịrị ekwesị.
Banye maka Freshmarketer n'efu
Ngosi: Abụ m mmekọ Freshmarketer’s Ntughari njikarịcha Suite.
Tags: ntụgharị mgbanwe njikarịchacroonye na -ere ahịa ọhụrụ